Blusens Edhisheni Chikwata | Gadget nhau
ActualidadGadget.com ndeimwe yemawebhusaiti ekuSpain pa gadget, software, komputa, internet uye tekinoroji mune zvese. Kubva 2006 tave tichitaura zuva nezuva zuva pane zvakakura zviri kuitika mubazi rezve tekinoroji, zvakare kuongorora kuwanda kwemidziyo kubvira kumakomputa ane simba kwazvo kusvika kune akapusa mafoni e-smartphone, anosanganisira maspika, monita, mafoni, mahwendefa kana vachenesa macoboti kungopa mienzaniso mishoma. Isuwo tinopinda zviitiko zvehunyanzvi yepasi rose seWMC muBarcelona kana IFA muBerlin kwatinotamisa chikamu cheboka redu revapepeti kuti vakwanise kuita zvakakwana chiitiko chekutevera uye ipa vaverengi vedu ruzivo rwese mune munhu wekutanga uye munguva ipfupi inogoneka.
Uyezve, mukati yedu tutorials chikamu iwe unogona kuwana ese marudzi eruzivo ruzivo ne nzwisisika nhanho-nhanho zvinyorwa izvo zvinosanganisira mapikicha uye / kana mavhidhiyo erubatsiro uye ayo anofukidza misoro zvakasiyana-siyana zvekuti anobva maitiro ekumisikidza Android piritsi a sei kurodha pasi pikicha kubva kufacebook kupa mimwe mienzaniso.
Kana iwe uchida kuona mimwe misoro yatinobata nayo pawebhu iwe unofanira kungoita shandisa peji yezvikamu uye ipapo uchavaona ese akarongeka nemusoro wenyaya.
Kuti ugadzire zvese zvemukati zvemukati uye nenzira yakaoma kwazvo, Gadget nhau ine timu yevagadziri vanove nyanzvi muhunyanzvi hutsva uye nemakore mazhinji echiitiko mukunyora zvemadhijitari zvemukati. Kana iwe uchida kuve chikamu cheboka redu revanyori iwe unongofanirwa kuzadza fomu iri uye isu tichazosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona.
Geeky mupepeti uye muongorori. Anoda zvemagadhi uye matekinoroji matsva. Anofarira kuziva uye kuyedza ese marudzi emidziyo, mafoni, makomputa, mapiritsi, malaptop, pakati pevamwe, uye akafara kugovana ruzivo rwangu nenyika kuburikidza nemazwi.
Kubva kutanga kwema90s, ndanga ndichifarira nezve zvese zvine chekuita netekinoroji uye komputa. Neichi chikonzero, kuyedza chero gadget iro hombe uye diki zvigadzirwa zvinounza, kuzviongorora kuti uwane zvakazara mazviri, ndechimwe chezvinhu zvangu zvinonakidza zvekuvaraidza.
Ini ndinoda zvese zvine chekuita netekinoroji uye ese marudzi emagetsi. Ndanga ndichiongorora mhando dzese dzemagetsi zvigadzirwa kubva kuma2000 uye ini ndinogara ndichiziva mhando itsva dzave kuda kubuda. Ini ndinototora zvimwe neni pandinodzidzira zvimwe zvandinofarira, kutora mifananidzo uye mitambo mune zvese. Ivo vangadai vasina kufanana vasina ivo!
Anoda matekinoroji matsva, asi kunyanya zvigadzirwa. Ini ndinonyatsoziva nezve akawanda madhizaini anoburitswa gore rega rega kuti ndikwanise kuwana izvo zvigadzirwa zvinondifadza zvakanyanya. Kana ndangowana, ndinozviongorora zvakadzika kuti ndizive mabhenefiti avanazvo.
Nguva dzose yakasungirirwa pane zvigadzirwa nemagetsi. Ini ndinoedza, kuongorora uye kunyora nezve mafoni uye ese marudzi emidziyo, zvishongedzo uye zvigadzirwa zvehunyanzvi zvenguva iyoyo. Kuedza kugara uri "pa", dzidza uye chengetedza ruzivo rwese rwenhau.
Ini ndinoda tekinoroji, kwete zvese iApple ... ini ndinofunga kuti makambani mazhinji uye mazhinji ari kugadzira zvinhu zvinonakidza uye isu tiri pano kuyedza nhau dzichangoburwa dzetekinoroji. Ndinoedza kutora zvese zvigadzirwa zvandinogona uye zvinopinda mumba mangu ...
Kushushikana nezve tekinoroji, ndinonakidzwa kunge mwana ane gadget. Ini ndinoda kuenzanisa akasiyana mamodheru, kutsvaga zvitsva maficha, uye kusvika pakuziva iwo matsva ari kuuya. Gadget inogona kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore, ndosaka ndichifarira kugovera zvandinoziva nezvavo.
Ini ndiri mainjiniya murudo netekinoroji nyowani nezvose zvakakomberedza network yemasaiti. Mamwe emidziyo yangu yandaifarira inondiperekedza mazuva ese, senge mafoni kana mapiritsi, zvishandiso zvinobatsira kusimudzira ruzivo rwangu uye ruzivo mune zvigadzirwa.
Nyanzvi yemakomputa kunyangwe anoda nyika yetekinoroji zvakajairika uye robhoti kunyanya, chishuwo chinonditungamira kuti ndiongorore uye nditsvage iyo rese network kutsvaga chero rudzi rwechinhu chitsva pamusoro pemagadgeti, angave ekufunda kana chirongwa.
Nyowani matekinoroji ndicho changu chechokwadi. Ini ndinoramba ndichinakidzwa sezuva rekutanga kutaura nezve chero gadget inorovera pamusika: maficha, hunyengeri, ... muchidimbu, zvese zvese nezve chero zvemagetsi gadget.
Ndiri kufarira kwazvo tekinoroji, kunyanya nhare mbozha. Ini ndinonakidzwa nekuziva nhau pamusoro pemagadget, uye kuvaedza kuti vawane, nekudaro, kana vachiendesa izvo zvavanovimbisa kana kana ari magajeti asinganyanyo kufadza zuva nezuva.
Gadgetmaniaco, uyo anofarira kuyedza gadget iyo inogona kushandiswa kuzviratidza mune chero hunyanzvi fomu. Uye zvakare, ini ndinoda kuyedza chero gadget rinouya nenzira yangu, saka ndine ruzivo rwakawanda nehunyanzvi hutsva uye ndinonakidzwa nekugadzirisa kusahadzika kupi kungamuka panguva yekushandisa nekubata.
Computer sainzi uyo anogara achifarira kuongorora zvigadzirwa zvitsva zviri kuuya pamusika. Kana paine chinhu chimwe chete chandinoda kushandisa yangu yemahara nguva pamwe, zviri kunyatso kuongorora zvese zvigadzirwa zvemagetsi zvinouya nenzira yangu.
Ini ndinoda zvese zvine chekuita netekinoroji nemidziyo. Ndiri kugara ndichida kudzidza zvese zvinyengeri zvine mhando dzakasiyana dzemagadgeti, zvinobatsira pakuzorora kana pabasa.
Vechidiki vanofarira zvehunyanzvi uye mota yenyika. Kuziva magajeti zvakadzama, kuona mashandiro avo kana mashandisiro avanoita chimwe chinhu chandinofarira.
Ndiri mukomana anoda technology. Ini ndinoda kudzidza sekureba sezvazviri pachinhu ichocho, kunyanya zvigadzirwa. Chero ani anondifarira, asi madhiraoni, otomatiki uye / kana otomatiki epamba nehungwaru hwekunyepera ndihwo utera hwangu.
Gadget agara achindinakidza, asi kuuya kwemafoni efoni kwakangowedzera kufarira kwangu mune zvese zviri kuitika muhunyanzvi hwenyika. Ini ndinotenda nemoyo wese kuti pakange pasina chiri nani uye chinobatsira gadget kupfuura icho.
Cristina Torres chinobata mufananidzo
Kushushikana nezve internet uye matekinoroji matsva, ini ndagara ndichida kuyedza zvese zvigadzirwa zvakawira mumaoko angu, ndichiona mashandisiro ese avaive nawo, uye ndichivaenzanisa neshanduro dzekare kuti vaone kana zvanyatsoita nani. Ini ndoda kuziva dzese nhau nezve magajeti andinowana, ruzivo rwandinoda kugovana newe.